ချိုးကွေ့ကားစတူဒီယိုအခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
မော်တော်ကားစတူဒီယို SK2 စာ
က operating system ကို run ဖို့ကြာအချိန်, သင့် PC မှာပေါ်ပေါက်သောပြည်တွင်းရေးဖြစ်စဉ်များအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုသည်။ Windows 10 ကိုအတော်လေးလျင်မြန်စွာ loaded ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းဤဖြစ်စဉ်ကိုပင်ပိုမိုမြန်ဆန်ဖြစ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အသုံးပြုသူမျှလည်းမရှိ။
Windows 10 ကို download, Up ကိုအရှိန်မြှင်
တဦးတည်းအကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်အခြား system ကို Boot တက်မြန်နှုန်းများအတွက်အချိန်နှင့်အတူလျော့သို့မဟုတ်ပိုင်းတွင်နှေးကွေးဖြစ်နိုင်သည်။ ရဲ့သင် operation system ကို run ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏ပစ်လွှတ်တဲ့စံချိန်အချိန်အောင်မြင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်ဆန်းစစ်ကြပါစို့။
Method ကို 1: ဟာ့ဒ်ဝဲအရင်းအမြစ်များကိုပြောင်းလဲနေတဲ့
သိသိသာသာ (ဖြစ်နိုင်လျှင်) RAM ကိုဖြည့်စွက်အားဖြင့် 10 windose ခြင်းဖြင့် Boot တက်အချိန်အရှိန်မြှင့်။ ဒါဟာ Boot တက် disk ကိုအဖြစ်, SSD ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏စတင်အရှိန်မြှင့်ဖို့လည်းအလွယ်ကူဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးဟာ့ဒ်ဝဲပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဘဏ္ဍာရေး outlay လိုအပ်သော်လည်း Solid-state drives ဖတ်ပြီးသား၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုသို့အတော်လေးတရားမျှတသည်နှင့်အမြန်နှုန်းကိုရေးနှင့် disk ကိုကဏ္ဍများတွင်ဝင်ရောက်ခွင့်အချိန်ကိုလျှော့ချ, ဆိုလိုသည်မှာသော်လည်း, OS က disk ကို၎င်း၏ Boot တက်ကဏ္ဍအတွက်လိုအပ်သော access လုပ်ပါတယ်ပိုမြန်သည့်အခါထက်သိသိသာသာဖြစ်ပါသည် သမားရိုးကျ HDD ။
drives တွေကိုဤ types များအကြားခြားနားချက်များအကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်လေ့လာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပျ၏နိုင်ပါတယ်။
ပိုများသော: အဆိုပါ Solid-State သံလိုက် disk တွေထံမှကွဲပြားခြားနားသည်အဘယ်သို့
ဒါဟာပင်အစိုင်အခဲပြည်နယ် drive ကိုအသုံးပြုမှုနှင့် download speed အမြန်နှုန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ရကျိုးနပ်သည်နှင့်ယေဘုယျ operating system ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်း, အားနည်းချက် user က SSD ကိုရန် HDD ထဲကနေ Windows 10 ကို၏အပြောင်းအရွှေ့အပေါ်အချိန်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီအပေါ်ကိုပိုမိုများအတွက် SSD ကိုရန် HDD ကနေ operating system နဲ့အစီအစဉ်များကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လိုဆောင်းပါးတွင်ကြည့်ပါ။
Method ကို 2: startup ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ထို့နောက် operating system ကိုအနည်းငယ် setting များကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ် 10 windose စတင်အရှိန်မြှင့်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပစ်လွှတ် OS ကိုစဉ်အတွင်းတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အငြင်းအခုံဟာ startup ထဲမှာအလုပ်များကိုစာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုရမှတ်သင့်ရဲ့ PC မှာဘွတ်ဖိနပ်ဟာနှေးကွေး, ရှိပါတယ်။ ယင်းအပိုင်းတွင် windose 10 ရဲ့ start မှာကွပ်မျက်ခံရခံရဖို့ကိုစတငျရာအလုပ်အကိုင်များကိုကြည့်ပါ "Startup စာမျက်နှာ" "Task Manager ကို"ခလုတ်ကိုပေါ်တွင် right-click နှိပ်. ဖွင့်လှစ်နိုင်သည့် "Start" နှင့် menu ကနေကိုရွေးချယ်ခြင်း "Task Manager ကို" သို့မဟုတ်သော့ပေါင်းစပ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် « CTRL + SHIFT + ESC ».
, ဝန်ပိုကောင်းအောင်အပေါငျးတို့သဖြစ်စဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများများ၏စာရင်းပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်မလိုအပ်သော disable လုပ်ဖို့ (သင်ရွေးချယ်ပြီးအမည်ပေါ်တွင်နှင့်ဖြတ်လမ်း menu ပေါ်တွင် right-click လုပ်ပြီးရန်လိုအပ်ပါတယ် "Disable").
Method ကို 3: အစာရှောင်ခြင်းဝန် switch ကို
စာနယ်ဇင်းများ "Start"ထိုအခါအိုင်ကွန်ပြီးနောက် "န့်သတ်ချက်များ" ။
ထဲမှာ "Options ကို" ကို select "စနစ်".
ထို့နောက်အကူးအပြောင်းအပိုင်းလုပ်ဆောင် "ပါဝါနှင့်အိပ်စက်ခြင်း mode ကို" နှင့်ကို item ပေါ်တွင်စာမျက်နှာကလစ်၏အောက်ဆုံး "ပိုပါဝါ options များ".
ပစ္စည်းရှာတွေ့ "ပါဝါခလုတ်ကိုများ၏လုပ်ရပ်များ" ထိုသို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ကိုထိပုတ်ပါ "လက်ရှိတွင်မရနိုင်ပါဖြစ်ကြောင်း setting များကိုပြောင်းလဲပါ"။ သငျသညျအုပ်ချုပ်သူ password ကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
လာမယ့်ရန်အကွက်ထားပါ "(အကြံပြုသည်) အစာရှောင်ခြင်း startup ကိုဖွင့်မည်".
ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူများ၏အင်အားသုံးအောက်မှာ run သောတင်အရှိန်မြှင့်ဖို့ကိုအများဆုံးရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေ 10 windose ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့ irreparable အကျိုးဆက်များပါဝငျပါဘူး။ သငျသညျစနစ်ပိုကောင်းအောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမယ့်ရလဒ်များ၏သေချာမသိကြပါလျှင်မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်,, တက restore point တစ်ခုဖန်တီးများနှင့်အရေးကြီးသောဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြုမှမည်သို့သက်ဆိုင်တဲ့ဆောင်းပါးပြောပြသည်။